I-17 yeNtlawulo ePhakamileyo ye-4 yeeNkqubo zeSatifikethi seVeki ekwi-Intanethi ngo-2022
I-17 yeNtlawulo yokuHlawula ngeyona ndlela iphezulu yeeVeki ezi-4 kwi-Intanethi
Ngaba uyazi ukuba ungasifumana isatifikethi kwiiveki ezi-4? Esi sithuba sibonelela ngeenkcukacha kwiinkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-Intanethi kwaye kuba zinikezelwa kwi-Intanethi, uya kukonwabela ukukhetha okuguqukayo kokufunda.
Kule mihla, akunyanzelekanga ukuba ulishiye ikhaya lakho okanye ushiye uxanduva lwakho kwimfuno yakho yokufumana isakhono okanye ufumane isidanga, idiploma, okanye isatifikethi. Enkosi kwimfundo ekwi-Intanethi apho amaziko emfundo amaninzi ayakwamkela ukwenza ukuba kube lula kwaye kubelula ukuba abantu babandakanyeke kwimisebenzi yezemfundo ngaphandle kokushiya indawo yabo yokuthuthuzela.
Kukho amaqonga awahlukeneyo okufunda kwi-Intanethi afana ne-Udemy, i-Khan Academy, i-Coursera, i-edX, i-futureLearn, i-Alison, kunye nezinye eziyilelwe ukukunika imfundo esemgangathweni kwi-intanethi kunye nezatifikethi eziqinisekisiweyo. Ezi ziqonga zokufunda ezikwi-Intanethi zihlala zinxulumana neeyunivesithi ezamkelweyo, iikholeji kunye namanye amaziko emfundo yindlela abakwazi ngayo ukukunika izakhono ozifunayo kunye nesatifikethi esaziwayo.
Kukho iinkqubo zesatifikethi kwi-intanethi ezinokugqitywa kwiiveki ezi-4 okanye ngaphantsi kwaye yile nto eli nqaku limalunga nayo. Ezi zifundo ziya kukunika isatifikethi kwiiveki ezi-4 kunye nokukuxhobisa ngezakhono kunye nolwazi lomdla owukhethileyo ngelo xesha. Ufuna kuphela izixhobo zokufunda ezikwi-intanethi ezithebhulethi okanye iPC kunye nonxibelelwano oluzinzileyo lweWi-Fi ukuzibandakanya kwezi nkqubo zeeveki ezi-4 ezikwi-intanethi.
Iinkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-Intanethi ziya kukubonelela ngezakhono kunye nolwazi oludingayo ngalo mzuzu, kungekho kubethwa ujikeleze ityholo nje ukuya kwinqanaba lokufunda. Ukuba unesakhono esele sikhona esi rusty kwaye ufuna ukusilola, ungaya kwiinkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 kwi-Intanethi ukomeleza iseti esele ikho.
Ukuba ufuna ukuphonononga ezinye iindlela zomsebenzi, iinkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-Intanethi zikwakho nokuya kwakho.
1 Ngaba inkqubo yesiqinisekiso seveki ezi-4 ilungile?
2 Amanyathelo okufumana iiNkqubo zeSatifikethi seVeki ezi-4 kufutshane nam
3 IiNkqubo zeSiqinisekiso seVeki ezi-4 ezikwi-Intanethi
3.1 Iinkqubo zeSatifikethi soKhathalelo lwezeMpilo
3.2 IiNkqubo zeSatifikethi seMfundo noQeqesho
3.3 Iinkqubo zeSatifikethi seShishini
3.4 Iinkqubo zeSatifikethi sezeMpilo kunye nokuQiniseka
3.5 Iikhompyuter yeNzululwazi kunye neNkqubo yeSatifikethi se-IT
3.6 Ubuntatheli kunye neNkqubo yeSatifikethi seMedia
3.7 Iinkqubo zeSatifikethi kwezobuGcisa noYilo
3.8 Iinkqubo zeSatifikethi seTekhnoloji
3.9 Iinkqubo zesatifikethi sokungenisa izihambi
3.10 Iinkqubo zeSatifikethi soMthetho
4 Iinkqubo ezi-4 zeVeki eziPhezulu zeVeki ekwi-Intanethi eCanada
4.1 Iindlela zonxibelelwano zeXesha eliDala
4.2 Uhlalutyo lwesini kuTshintsho
4.3 Ubunkokeli obunenguqu kulungiso oluquka konke
4.4 Ukuqonda nokuLawula uxinzelelo loMsebenzi wamaPolisa
4.5 Izakhono zoLwazi lokuFundisa
4.6 Yakha eyakho iApp App
4.7 Umhlaba wethu onamandla
Ngaba inkqubo yesiqinisekiso seveki ezi-4 ilungile?
Iinkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 zilungile, zikunika izakhono ozifunayo ukuze ungene kubasebenzi okanye ukhethe ikhondo elitsha lomsebenzi. Ufumana ulwazi oluthe kratya kuwo nawuphi na umhlaba ngexeshana elifutshane, wandise umvuzo wakho uwonke, ukubaluleka kwentlalo, imveliso yakho emsebenzini, kwaye kuyanceda ukuba uqhubeke nokukhula.
Amanyathelo okufumana iiNkqubo zeSatifikethi seVeki ezi-4 kufutshane nam
Akukho nkqubo ikhethekileyo ebandakanyekayo ekufumaneni inkqubo yesiqinisekiso seveki ezi-4 kufutshane nawe, kwaye akukho nzima ukuyifumana. Kuba unesixhobo esiphathwayo esinonxibelelwano lwe-intanethi osele ulisebenzisa ukufunda oku, khangela nje ngoGoogle.
Kodwa emva koko, uninzi, ukuba ayingabo bonke, iinkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 zikwi-Intanethi kwaye kuba zikwi-Intanethi akufuneki zisondele kuwe ngokoqobo. Ngesixhobo sakho esiphathwayo, unokujoyina ikhosi ekwi-Intanethi kwaye ufumane isatifikethi emva koko.
Uluhlu oludwelisiweyo kwaye kuxoxwe ngalo ngezantsi ziinkqubo ezahlukeneyo zesatifikethi seveki ezi-4 kwi-Intanethi ungayifumana leyo inomdla kuwe.
IiNkqubo zeSiqinisekiso seVeki ezi-4 ezikwi-Intanethi
Apha ngezantsi kukho iinkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-intanethi eziza nentlawulo ephezulu wakube usifumene isatifikethi sakho kwaye ukulungele ukuqeshwa.
Iinkqubo zeSatifikethi soKhathalelo lwezeMpilo
IiNkqubo zeSatifikethi seMfundo noQeqesho
Iinkqubo zeSatifikethi seShishini
Iinkqubo zeSatifikethi sezeMpilo kunye nokuQiniseka
Iikhompyuter yeNzululwazi kunye neNkqubo yeSatifikethi se-IT
Ubuntatheli kunye neNkqubo yeSatifikethi seMedia
Iinkqubo zeSatifikethi kwezobuGcisa noYilo
Iinkqubo zeSatifikethi seTekhnoloji
Iinkqubo zesatifikethi sokungenisa izihambi
Iinkqubo zeSatifikethi soMthetho
Ngaba uyafuna ukwandisa ulwazi lwakho ngeshishini lokhathalelo lwempilo? Kutheni ungabhaliseli enye yeenkqubo zayo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-Intanethi? Ayizizo zonke iinkqubo zokhathalelo lwempilo ezigqityiweyo kwiiveki ezine kodwa ezinokugqitywa kwiiveki ezine Isondlo somntwana kunye nokupheka, Ukuphela kobomi babantu abaneDementia, yaye Isikhokelo sokuGcina iintsana ezisanda kuzalwa zikhuselekile kwaye zisempilweni.
Ezi ziinkqubo ezithile zesatifikethi sokhathalelo lwempilo onokuzigqiba kwiiveki ezine kwaye ufumane ulwazi oluya kukuvulela amathuba kwicandelo lezonyango.
Ootitshala bangathatha iinkqubo zesatifikethi seeveki ezi-4 kwi-intanethi kwizifundo zemfundo noqeqesho ukwandisa ulwazi lwabo kwaye bafunde izakhono zokufundisa zanamhlanje abanokuthi bazisebenzise kwigumbi lokufundela. Abantu abafuna ukusungula ikhondo elitsha ekufundiseni bayakhuthazwa ukuba babhalise kwinkqubo yesatifikethi.
Zininzi iinkqubo zemfundo, ezinye zithatha ukuya kwiinyanga ezi-6 ukuya kunyaka omnye ukugqiba kodwa kukho ezinye onokuzigqiba kwiiveki ezi-1 kuphela. Bazi Uqeqesho loLwimi, Ukuqikelela ukuSebenza nokuPhepha koPhulo, kwaye Ukufundisa abantwana abaziziThulu. Ukuba ukwanguwe ophetheyo kuqeqesho lwabasebenzi, bhalisa kule nkqubo ngokunjalo.
Ukuqhuba ishishini kunokuba ngumsebenzi otyhafisayo kwaye amaxesha amaninzi uya kuzifumana uphuma kwimibono kwaye ngenxa yemodeli eguqukayo yeshishini kunokuba nzima ukuhlala emgceni. Ukuba ufuna ukuhlala kwishishini, funda ukuba ungatshintsha njani kunye neendlela zamashishini zamva nje, ubhalise kwinkqubo yesatifikethi.
Inkqubo yesatifikethi seshishini ihlala ithatha ixesha elininzi ukuyigqiba kodwa zimbalwa ezinokugqitywa kwiiveki ezi-4 kuphela ezamkelwa njengeenkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-Intanethi ezinikezelwa ngeqonga lokufunda elikwi-intanethi zizikolo zeshishini ezivunyiweyo. Iinkqubo zesatifikethi seshishini leveki ezi-4 zezi;
Inkcazo yoHlolo lweMali
Unxibelelwano ngeShishini ngokuBalulekileyo
Ukubala ngokuSebenza kwiShishini
Umatshini wokufunda iialgorithms kunye no-R kuHlahlelo lweShishini
Imigaqo yokuLawulwa kobudlelwane babaThengi
Umboniso woShishino kunye neZenzo
Isiseko sokugcina iincwadi
Eli candelo lineenkqubo ezimbalwa zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-Intanethi kwabo banomdla wokuqalisa ikhondo lomsebenzi omtsha kwishishini lokomelela komzimba okanye ukuba unesidingo sobuqu sokuphakamisa impilo-ntle yakho ungabhalisa kwezi zifundo. Abantu baya kufunda ukuba imithambo ikhuthaza njani ukuba sempilweni kunye nohlobo olufanelekileyo lokuzilolonga kumntu wonke.
Unokusebenzisa ubuchule kunye nolwazi olufunyenweyo ukuze ungene kwishishini lezempilo kunye nokomelela njengomrhwebi. Iikhosi zeeveki ezi-4 ezikolu luhlu zezi Inzululwazi Yomthambo, Iincoko zoQeqesho lwezeMpilo, Ukuyila isicwangciso sakho sokulahleka kwesisindo, kwaye Ukuziqhelanisa nokuziqhelanisa noPhuhliso lobuGcisa.
Icandelo leKhompyuter yeSayensi kunye ne-IT zezinye zeendawo ezihlawula kakhulu kwihlabathi liphela kwaye abantu abanezakhono kule ndawo bahlala befuna emva koko. Nawe ungangena ebaleni ngokubhalisa kwinkqubo yesatifikethi, nangona kunjalo, ukuba umtsha kwikhompyuter nakwinkalo ye-IT akucebisi ukuba ubhalise kwinkqubo yeeveki ezi-4.
Okokuqala, yintsimi entsha ngokupheleleyo kuwe, ke kuya kufuneka uqale kwisiseko kwaye, ngokunyanisekileyo, ayinakwenzeka kwiiveki ezi-4 kuphela. Uninzi lweenkqubo ezisisiseko zithatha ukuya kwiinyanga ezi-2 okanye nangaphezulu kuxhomekeke kwinqanaba ofuna ukuya kulo.
Nangona kunjalo, ukuba sele unolwazi olusisiseko emva koko isatifikethi seveki ezi-4 siyakwenzela okuhle kakhulu. Inkqubo iya kuphucula kwaye yandise ulwazi lwakho kunye nezakhono kwiiveki ezi-4 kuphela kwaye ukuba inomdla kuwe, ezi zilandelayo zinkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 kwi-intanethi onokufuna ukuyenza:
I-AiChatbots ngaphandle kwenkqubo
Izinto ezisisiseko zeNzululwazi yeDatha (iiveki ezi-6)
IziSeko ze-IT zaBaphengululi beShishini
Inkqubo yeDynamic, iiAlgorithms ezibawayo
Njengentatheli okanye unqwenela ukusebenza kwiqonga leendaba kufuneka uthathele ingqalelo ukuthatha enye okanye ezimbini kwezi 4 zeenkqubo zesatifikethi seveki kwi-intanethi ukukhulisa izakhono zakho kunye nokufumana ulwazi olutsha. Iikhosi ziya kwandisa ubuchwephesha bakho ngakumbi ukuba sele usentsimini, uya kufumana amathuba angcono kunye nokuhlawulwa okuphezulu.
Zininzi iikhosi eziphantsi kobuntatheli kunye neenkqubo zesatifikethi semithombo yeendaba ezinokuthatha ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-2 okanye nangaphezulu, kodwa ukufumana izakhono ezikhawulezayo ebaleni kungaphelanga inyanga okanye ukubhalisela ngaphantsi kuzo naziphi na okanye kuzo zonke iikhosi ezingezantsi;
Ukubhalela amajelo eendaba ezentlalo
Ukuhambisa iindaba ngokukuko kubaphulaphuli
Unxibelelwano oludibeneyo lokuthengisa
Ezi zifundo ziya kukunika izakhono zobuntatheli ezikhawulezayo kunye nolwazi xa uzigqibile.
Isatifikethi kwezobugcisa kunye noyilo sinokukuhlawulela imali ephezulu ngaphandle kweyunivesithi okanye isidanga sasekholejini, uya kufumana umvuzo ophakame kakhulu ukuba unaso esi siqinisekiso. Kwicandelo lobugcisa kunye noyilo izinto zihlala zitshintsha, yintsimi eguqukayo kwaye kufuneka uqhubeke notshintsho ezinye izakhono zakho ziya kuthathwa njengezakudala.
Ukugcina akukho mfuneko yokuba uye eyunivesithi okanye kwikholeji kwaye ufumane isidanga kwakhona endaweni yoko ukubhalisela inkqubo yesatifikethi kuya kukunceda ngcono kakhulu. Inkqubo yesatifikethi kubugcisa nakwiyilo iya kukuxhobisa ngezakhono kunye nolwazi olulungele imeko yangoku, ikwenze ube yingcali, kwaye ube nezakhono zangoku ezifunekayo kwimarike.
Ukuba ufuna ukufumana izakhono ngokukhawuleza, kuya kufuneka ubhalise kwenye yezi ziqinisekiso zeeveki ezi-4 ezikwi-intanethi kwaye uphucule izakhono zakho ngexesha elifutshane. Ezinye zezatifikethi zobugcisa kunye noyilo ezinokugqitywa kwiiveki ezi-4 Iinkonzo zokuCinga nokuYila iiDolophu, ubuGcisa bemihla nezimvo, uMbutho wamaDatshi kunye noMculo weCarillon, kwaye Ukwenziwa kwemizobo.
Imfuno efunekayo kwiinkqubo ezininzi zesatifikethi sobuchwephesha zifuna abanqwenelekayo ukuba bafumane isidanga okanye babe namava eminyaka yokuqwalaselwa ukubhaliswa. Kuya kufuneka ube unolwazi olusisiseko okanye amava, ngaphandle kwalonto awuyi kukuqonda oko ukufundiswayo. Kuya kufuneka sele uneengcinga zokucinga kunye nezakhono zokuqiqa kunye nesakhono sokusombulula iingxaki ngokunjalo.
Ukuphucula ulwazi olukhoyo kunye nezakhono onokuthi ube nazo kwisithuba sobuchwephesha ubhalise kwinkqubo yesatifikethi kuya kukunceda kakhulu. Uya kufunda iindlela ezintsha, ezilula zokusombulula iingxaki kunye nolunye ulwazi olongezelelweyo oluza kukunceda.
Iinkqubo ezininzi zetekhnoloji zithatha iinyanga ezi-6 ukuya kwiinyanga ezili-10 ukugqiba kodwa bambalwa kakhulu onokuzigqiba kwiiveki ezimbalwa ukuya kwinyanga enye. Bayaziwa njengeenkqubo zesatifikethi seveki ezi-1 kwi-intanethi, ukufumana isatifikethi kunokufumana isikhundla sokunyusa kwindawo osebenza kuyo kunye nentlawulo ephezulu ngokunjalo.
Ezinye zeenkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-Intanethi kubuchwephesha zezi:
I-AI kunye nokuFunda ngomatshini
Ulwakhiwo lweeProjekthi zokufunda zoMatshini
Uhlalutyo oluPhucukileyo lweMveliso
Umzi-mveliso wokubuk 'iindwendwe uya usanda ngokwanda kwihlabathi liphela kwaye ukuba ufuna isiqwenga sekhekhe ubhalise kwinkqubo yesatifikethi okanye ufumane isidanga. Idigri iya kuthatha iminyaka ukuyigqiba ngelixa isatifikethi siza kuthatha iinyanga ezimbalwa kwaye ukuba unethamsanqa, ungabona izifundo ezinokugqitywa kwiiveki ezimbalwa.
Ikhosi kuphela kwicandelo lokuBuka iindwendwe elinokugqitywa kwiiveki ezi-4 kuphela Ulawulo lweGumbi lehotele ikhosi enikwa kwi-Intanethi yiKamvaLearn. Yenye yeenkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-Intanethi ezinokugqitywa ngexesha elifutshane kwaye zize nomvuzo omkhulu.
Uninzi lweenkqubo zesatifikethi somthetho zifuna abanqwenela ukuba bagqibe kwaye bafumane isidanga sabo somthetho, uya kuvuma nam ukuba iinkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 emthethweni azinakukufundisa ukuba ungaliphumelela njani inkundla. Ulwazi olusisiseko alwanele ukubhalisela le nkqubo yesiqinisekiso, kuya kufuneka uyiqonde ngokupheleleyo imigaqo yokuba ligqwetha emva koko inkqubo yesatifikethi iya kongeza ngakumbi kulwazi lwakho.
Ke, abaphumeleleyo kwezomthetho abafuna ukuhlaziya iinkumbulo zabo okanye bafumane ukuqonda ngakumbi ngesihloko esithile kufuneka bahlanganisane apha. Ezi zifundo zilandelayo ziya kulwandisa ulwazi lwakho kwaye zinokukubeka kumvuzo ongcono;
Umthetho wabucala kunye nokuKhusela idatha
Umthetho welungelo lokushicilela
Umthetho welungelo elilodwa lomenzi
Iinkqubo ezi-4 zeVeki eziPhezulu zeVeki ekwi-Intanethi eCanada
Nazi ezinye zeenkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-Intanethi ezibonelelwa ngamaziko aseCanada, ukuthatha inxaxheba kuzo kuya kukunika izatifikethi ezivela kwiziko laseCanada eligunyazisiweyo.
Iindlela zonxibelelwano zeXesha eliDala
Uhlalutyo lwesini kuTshintsho
Ubunkokeli obunenguqu kulungiso oluquka konke
Ukuqonda nokuLawula uxinzelelo loMsebenzi wamaPolisa
Izakhono zoLwazi lokuFundisa
Yakha eyakho iApp App
Umhlaba wethu onamandla
Le yenye yeenkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-Intanethi ezibonelelwa yiDyunivesithi yaseToronto, Canada ngeCorsera. Yenzelwe abaqalayo ukuba baphuhlise amandla abo onxibelelwano ukuze bakwazi ukuthatha indima yobungcali okanye yobunkokeli kumbutho.
Le nkqubo ikwabonelelwa nge-Intanethi yiYunivesithi yaseToronto kwaye ithatha iiveki ezi-4 ukugqibezela isatifikethi esenza ukuba ibe yenye yeenkqubo zeziqinisekiso zeeveki ezi-4 ezikwi-Intanethi eCanada. Uya kufunda indlela yokuhlalutya iimveliso, iinkonzo, iinkqubo kunye nemigaqo-nkqubo ene-lens yesini ukufumanisa amathuba afihliweyo okwenza izinto ezintsha kunye nokusebenza.
Ukuba ufuna ukuthatha indawo yokuphatha okanye yobunkokeli kumbutho wakho, unokucinga ngokuya kule khosi. Uya kufunda ukuba ngumnxibelelanisi onqwenelekayo nesebenzayo ngokuphuhlisa ibhokisi yezixhobo yezakhono zobunkokeli ekwakheni nasekulawuleni amaqela ahlukeneyo.
Ikwayenye yeenkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-Intanethi ezibonelelwa yiDyunivesithi yaseToronto kwaye zifundiswe kwi-Intanethi kusetyenziswa iCursera.
Ubupolisa bebusoloko bucela umngeni ngokwasemphefumlweni, ngamafutshane, ngumsebenzi onzima kwaye unokwenza lula ukuba umntu aphule. Le khosi yeyabasebenzi bamapolisa kwaye ukuthatha le nkqubo yesatifikethi kuya kubafundisa indlela yokujongana namava abuhlungu nawucelomngeni abahlangana nawo ebaleni.
Inkqubo ibanjwa kwi-Intanethi kwaye igqitywe kwiiveki ze-4.
Le yenye yeenkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-Intanethi ezibonelelwa yiYunivesithi yaseToronto kwaye zifundisa kwi-Intanethi nge-edX kwaye ijolise kootitshala ukuze babaphuhlise ngokufanelekileyo. Le nkqubo iqala ukusuka kwinqanaba lokusekwa ukuya kwinqanaba eliphambili, ukuxhobisa ootitshala ngezakhono zokufundisa ngezempilo kunye nendlela abanokuzisebenzisa ngayo kwikharityhulam yabo.
IOS yindlela yokusebenza yezixhobo zeApple kwaye uninzi lwenkqubo kunye nabaphuhlisi beapp bafumana umvuzo ngokwakha iiapps ze-iOS. Aziqhelekanga kakhulu kodwa ungazibandakanya nale ndawo incinci yabaphuhlisi beapps ngokufumana izakhono eziyimfuneko xa ubhalisa kule nkqubo yesiqinisekiso.
Ngenye yeenkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-Intanethi ezibonelelwa yiDyunivesithi yaseToronto kwaye zifundiswe kwi-Intanethi kusetyenziswa iCursera.
Le yikhosi yesiqinisekiso seveki ezi-4 ebonelelwe yiYunivesithi yaseToronto kwaye ifundiswa nge-edX. Ngokukodwa kubantu abakwiNzululwazi yezeNdalo, babafundisa ngakumbi malunga nendlela umhlaba osebenza ngayo. Uya kufunda kwakhona ngendlela amandla omhlaba ahlala ngayo kumphezulu womhlaba kunye nokuvumela iplanethi ukuba ixhase ubomi.
Ezi zezona nkqubo ziphakamileyo zesatifikethi seveki ezi-4 ezifumaneka kwi-Intanethi eCanada, awunyanzelekanga ukuba ube seCanada ukuze ubhalisele naziphi na kwezi zifundo. Kuvulelekile kubantu abanomdla abavela kwihlabathi liphela.
Imisebenzi eyi-12 yokuhlawula ngokuBalaseleyo kuMandla
Iingcebiso ezi-3 zokuHlawula iMali mboleko yoMfundi ngokukhawuleza
Izifundo ezimfutshane ezingama-35 + ezikhokelela kwimisebenzi elungileyo
Iikhosi ezingama-25 zeXesha elifutshane elinomvuzo ophezulu
Ubungcali obuphezulu be-17 be-Canadian Scholarships-Ukuhlawula okuphezulu
I-13 yokuHlawula ngokuBalaseleyo kwabaFundi kwilizwe liphela
izifundo zekhompyutha Funda iSakhono kwi-Intanethi Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Isifundo eCanada | Ukwamkelwa | Ulwabiwo-mali | Imirhumo | Izibonelelo neMali mboleko funda kwi-intanethi
Iinkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikwi-intanethiamanyathelo okufumana iinkqubo zesatifikethi seveki ezi-4 ezikufutshane namiinkqubo zesatifikethi se-4 eziphezulu kwi-Intanethi eCanada
Post Previous:Amaziko okuFunda aPhezulu e-17 eCanada
Okulandelayo Post:Ubungcali obuphezulu be-4 Soccer e-USA
Sabiha Touseef uthi:
Novemba 2, 2021 kwi-8: 14
Ndinomdla kolu ncedo .
Cho Zin Oo uthi:
Juni 19, 2021 kwi-3: 57
Ndifuna ukufunda i-17 yokuDlala ngokuPhakamileyo ii-4-iiveki zeenkqubo zesatifikethi kwi-intanethi. Ndifuna ukufumana isatifikethi simahla.